Ivenkile yosetyenziso | IPhone iindaba
La Ivenkile yosetyenziso yiyo Ivenkile yeApple kwizixhobo zayo eziphathwayo, sinokuthi ibingunobangela oyinyaniso wokuphumelela kwe-iPhone kunye ne-iPod Touch kwaye kamva i-iPad. Kule venkile unokufumana usetyenziso lwayo yonke into, ukusuka kwi-GPS navigators ukuya kwimidlalo, ngokusetyenziswa kolawulo lomsebenzi, ezemidlalo, iindaba, njl. Kwi Ivenkile yosetyenziso Sifumene iibhiliyoni zezicelo, ezinye zisimahla kwaye ezinye ziyahlawulwa. Kweli candelo siza kukubonisa utshintsho kule venkile, iindaba zayo nazo zonke iindaba ezinxulumene nayo.
Funda iilwimi naphi na kwaye ngesantya sakho nge-italki
por UIgnacio Sala yenzayo Iintsuku ze6 .
Akukho mntu unokuphika ukuba isiNgesi besisoloko silulwimi lwehlabathi lonke, ulwimi onokuthi uzenze uqondwe ngalo...
I-Apple ikhetha ukuhlawula izohlwayo eNetherlands endaweni yokongeza ezinye iindlela zokuhlawula
por UIgnacio Sala yenzayo Iinyanga ze3 .
I-Netherlands Consumer and Markets Authority inyanzelise inkampani esekwe eCupertino okokugqibela…
I-WhatsApp igqibezela iinkcukacha zokudlulisa iingxoxo ukusuka kwi-Android ukuya kwi-iPhone
por UJordi Gimenez yenzayo Iinyanga ze4 .
Le ihlala yenye yeentloko zokuqala ezithi abasebenzisi abavela kwi-Android baye kwi-iPhone babe…
Ifoto yePixelmator ngoku iyafumaneka kwi-iPhone
por UJordi Gimenez yenzayo Iinyanga ze5 .
Esinye sezicelo zokuhlelwa kwemifanekiso kwiMac kunye ne-iPhone yiPixelmator, kwaye yaziwa ngcono njengePixelmator ...
I-App Store iphula irekhodi yengeniso yonyaka
por UToni Cortés yenzayo Iinyanga ze5 .
Ukuba sele kulo nyaka uphelileyo kwihlabathi liphela sichithe idlelo kwizicelo eziphathwayo, ikakhulu ngenxa yokuvalelwa ...
Le yeyona midlalo ibalaseleyo kunye neeapps zika-2021 ezinikezelwe yiApple App Store Awards
por Ingelosi Gonzalez yenzayo Iinyanga ze6 .
Ukuphela konyaka kunye nayo yonke into ebandakanyekayo sele kukufutshane. Isishwankathelo siqala, ...
Uzifumana njani ii-apps ezicinyiweyo kunye nemidlalo kwi-iPhone okanye kwi-iPad
por UJordi Gimenez yenzayo Iinyanga ze6 .
Ngokuqinisekileyo uninzi lwenu lucime usetyenziso kwi-iPhone okanye kwi-iPad yakho nangasiphi na isizathu kunye nexesha elifutshane ...
Unokuba nePiP njani kuYouTube ngaphandle kokuhlawula iPremium (kwaye ngaphandle kwentengiso)
por ULuis Padilla yenzayo Iinyanga ze6 .
Sikubonisa indlela onokuyonwabela ngayo iYouTube ngaphandle kwentengiso, kunye noMfanekiso okwiMfanekiso (PiP) osebenzayo kwaye udlale ...
Hill Climb Racing 2 umdlalo ufumana uhlaziyo enkulu
Lo mdlalo ubukhona iminyaka eliqela kwivenkile yesicelo se-Apple awuyeki uhlaziyo rhoqo ...
I-Apple ayikwazi ukulibazisa ukuphunyezwa kwamanye amasango entlawulo kwi-App Store
por UIgnacio Sala yenzayo Iinyanga ze6 .
Nangona iziphumo zetyala phakathi kwe-Apple kunye neMidlalo ye-Epic yayithandeka ngakumbi kwi-Apple kune-Epic, ijaji ...
Inkonzo yomdlalo wevidiyo yeNetflix ngoku iyafumaneka kwi-iOS
por UAlex Vicente yenzayo Iinyanga ze6 .
Ukuba kwiveki nje edlulileyo sikuxelele ukuba iNetflix isungule inkonzo yayo yomdlalo wevidiyo eqala nge-ecosystem ye-Android ...
Ezonaapps zilungileyo zokuzoba ngepensile yeApple kwiPro Pro
Ezona zixhobo zilungileyo zephepha lodonga ze-iPhone
Uyicelile indlela yokubuyiselwa imali kwiVenkile yosetyenziso ngokuthe ngqo kwi-iPhone
Uyifumana njani kwakhona iphasiwedi yakho ye-ID ye-Apple
I-Google Drayivu ikuvumela ukuba ubeke ikhowudi enamanani ama-4 okhuseleko
Amaqhinga ali-10 ekufuneka uwoyisile amanqanaba ezityalo vs iZombies 2
Uyibanga njani imali yakho kwi-iTunes